Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : October 2007
Your comrades chase e'en now the fliers--
၂၀၀၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ English for all မဂ္ဂဇင်းတွင် Arthur Huge Clough
၏“say not,The struggle naugth avallaith” ကဗျာကို ဂျူနီယာဝင်း က
” မျှော်လင့်ချက်နှင့် အသက်ရှင်”
အချိန်တွေလာတယ်” ”The darkest hour comes just before the dawn”
Posted by Junior Win at 7:21 PM No comments:
၁၃၆၉ ခုနှစ်သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ အမှတ်တရ အဖြစ်
ဆားတောင်ဆရာတော် မကြာခဏမိန့်ကြားသည့်အဆုံးမမိန့် စကားလက်ဆောင်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအားနဲ့မာန်နဲ့ထုတ်ရတယ်။မသေချာမရေ ရာ ဘူးလို့ပြောလို့ ရတဲ့အလုပ်တွေတောင်မှဟုတ်နိုးနိုးနဲ့သက်စွန့်စံဖျားလုပ်နေရတာပဲ။သေချာရေရာတဲ့အလုပ် ဘာပဲလုပ်စရာရှိလဲ။ဆင်းရဲတစ်ဘ၀ပေါ့။တစ်ဘ၀တောင်မှခဏလေးပါ။
၈။ မ်ိမိခန္ဓကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာကိုသည်းခံရူမှတ်နိုင်မှပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လောကဓံကိုလဲခံနိုင် ရည်ရှိမှာပဲ။
၁၀။ အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဆိုတာရုပ်ရယ်၊နာမ်ရယ်၊တရားရယ်ဒီသုံးဦးနဲ့ပဲအဖော်ပြုနေ တာပါ။သူတို့မှာပျင်းတယ်မရှိပါဘူး။
၁၂။ ပထမတော့တရားကိုလူကဦးဆောင်တယ်။နောက်တော့တရားကလူကိုဦးဆောင်တယ်။ အဒီအချိန်မှာလူကတရားနောက်လိုက်ဖို့လိုတယ်။
၁၃။ ခန္ဓာကတော့သူ့တရားသူပြနေတာပဲ။လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟဖုံးနေတော့ဘာမှမသိလိုက် ရဘူး၊
၁၆။ တရားနှင့်အိပ်စက်ခြင်း၊တရားနှင့်နိုးထခြင်း၊တရားနှင့်မွေ့လျော်ခြင်း၊ဒါ အပ္ပမာဒတရားပဲ။
၂၄။ ဘုရားစကားနားလည်အောင်လုပ်၊ဘုရားစကားနားလည်ရင်လောကစကားတွေအားလုံး နားလည်တယ်။
Posted by Junior Win at 6:46 PM No comments:
Posted by Junior Win at 6:15 AM No comments:
Posted by Junior Win at 8:25 PM No comments:
(ဘင်ဂျမင်ဖရင်ကလင် ၏ ၀ီစီလေးအတွက်တန်ဖိုးများများမပေးပါနှင့်
Posted by Junior Win at 8:09 PM No comments:
Posted by Junior Win at 2:05 AM 1 comment:
One after one, the sound of rain, and bees
smooth field, white sheets of water, and pure sky,
sleepless! and soon the small bird’ s melodies
Must hear, first uttered from my orchard trees:
And the first cuckoo s melody cry.”
“Even thus last night, and two nights more, I lay,
And could not win thee , Sleep! by any stealth:
So do not let me wear to night away;
Without Thee what is all the morning ‘s wealth?
Come, blessed barrier between day and day.
Dear mother of fresh thoughts and joyous health. “
ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၀၆ English for all မဂ္ဂဇင်းတွင် Wordsworth ၏ To Sleep ဟူသောကဗျာကို ဂျူနီယာဝင်း ကယခုလိုဘာသာပြန်ဆ်ိုထားပါသည်။ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်လိုပါ၏ ဟုကဗျာကဆိုထားပါသည်။သိုးတွေရေ တွက်ရင်း၊ ခေါင်မိုးပေါ်ကျလာသည့်မိုးရေစက်တွေကို စိတ်ကူးဖြင့်ရေတွက်ရင်းခေါင်းထဲမှာမူးဝေလာကာအိပ် ပျော်သွားနိုင်ပါသည်။ ထိုနည်းတွေစုံပါပြီ။ အိပ်၍မပျော်ပါ။ အိပ်ရာပေါ်မှာ နိုးနေရင်းမနက်ခင်းရောက်လာ သည့်တိုင်ဖြစ်ပါသည်။ အိပ်လို့မပျော်နိုင်သူတစ်ယောက်အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ အိပ်စက်ခြင်းဆိုတာသည် ပင်ပန်းဆင်းရဲဒုက္ခနာကြည်းရသမျှတွေကိုဆေးကြောပစ်ခြင်းဟု၎င်း၊ ခံစားနာကျင်ရတာတွေကိုကုစားဖို့ဟု ၄င်း၊ အိပ်စက်ခြင်းဟူသည် ဘ၀၏စားသောက်ပွဲတွေထဲမှာအဓိကျသော အရသာအရှိဆုံးဟင်းလျာတည်း ဟူ၍တင်စားပုံဖော်ကြ လေသည်။ အိပ်လို့ပျော်အောင်ကြိုးစားဖူးသူများခံစားနားလည်နိုင်ကြပါလေတော့ မည်။
မိုးရေစက်တွေကို စိတ်ကူးနဲ့ ရေတွက်ဖို့ ကြိုးစားမိတယ်
ပြီးတော့ ပျားပိတုန်းတွေ တ၀ီဝီသံ...
ကျယ်ပြန့်လှတဲ့ လယ်ကွင်းပြင်ကို မြင်ယောင်...
ကိုယ့်ခြံထဲက ဌက်ကလေးတွေ တေးဆိုသံကြားရတော့မည်..
ပြီးတော့ ဥသြဌက်ကလေးက အလွမ်းတေးနှင့်
”ကိုယ့်မှာတော့ မနေ့ညကလည်း ခုလိုမအိပ်ရ၊
အဲဒီညမတိုင်မီ နှစ်ညတာလည်း ထိုနည်းနှင်နှင်။
ကိုယ့်ဆီ တိတ်တဆိတ် ၀င်လာပါတော့လား။
ဒီညသာ အိပ်မပျော်ရင် ဖြင့်
ကိုယ်ဟာ နောက်တနေ့မနက်ခင်းကို ဘယ်လိုခံစားရပါ့ ။
နေ့ရက်တွေကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ ခွန်အားတွေ အင်အားတွေကို
ပျော်ရွှင်လတ်ဆတ်တဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းမူတွေ နဲ့အတူနိုးထလာရမှာပဲ ။”
Posted by Junior Win at 8:39 AM No comments: